Deezloader: အဲဒါဘာလဲ၊ ဘာလဲ? | Gadget သတင်း
Eder Esteban | | ပင်လယ်ဓားပြ, လွှ
အချို့သောသူတို့သည် Deezloader အမည်ကိုသိကောင်းသိနိုင်သည်။ အများစုမှာအများအားဖြင့် ၄ င်းသည်ဤနာမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးအကြိမ်ကြားသိရခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ပြီးသင့်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုပြောပြမယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကအသုံးပြုသူများကိုမှပေးထားသော utility ကိုအပြင်, ကဘာလဲဆိုတာသိနိုင်အောင်။ ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုများစွာသောအကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်သည်ကတည်းက။
အချို့လူများက၎င်း၏အမည်ပေါ်တွင်အခြေခံပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသကဲ့သို့ Deezloader သည် Deezer နှင့်ရှင်းလင်းသောဆက်ဆံရေးရှိသည်, ဂီတ streaming ဝန်ဆောင်မှု။ ဘယ်လိုဆက်ဆံရေးမျိုးကိုသင်မေးမလဲ။ ဒီပလက်ဖောင်းနှစ်ခုကြားကဒီဆက်နွယ်မှုအကြောင်းဒီအကြောင်းကိုမင်းတို့အားလုံးပြောပြမယ်။
1 Deezloader ကဘာလဲ။
2 Deezloader သည်မည်သည့်အရာများလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သနည်း။
3 Deezloader ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ရသလား။
ပထမ ဦး စွာသင် Deezer အကြောင်းပြောဆိုရန်ရှိသည်။ ၎င်းသည် streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်မူလကဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Premium account များတွင်အသုံးပြုသူများသည် music နှင့်နားထောင်ခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းတို့ကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည် segment အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
တကယ်တော့သူတို့လက်ရှိရှိသည် တစ်လလျှင်သုံးစွဲသူ ၁၅ သန်းခန့်ရှိသည်၆ သန်းခန့်သည်သုံးစွဲသူများကိုပေးဆောင်နေကြသည်။ Deezer မှာသီချင်းအရေအတွက် ၅၃ သန်းလောက်ရပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။ မတူညီသောရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနပေါင်း ၃၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ သင်သိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အခြားသူများအကြား Android, iOS, Windows သို့မဟုတ် MacOS တို့တွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် Multiplatform အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သုံးစွဲသူများသည်သင်ပေးရမည့် Deezer ၏အထူးအကောင့်များပေါ်တွင် ဤသီချင်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ သို့သော်အခမဲ့အကောင့်ရှိသောသူများအတွက်ဤရွေးချယ်မှုသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဤတွင် Deezloader သည်ဤပုံပြင်၌သူ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖွင့်ဘို့တာဝန်ရှိသည်ကတည်းက။ ဒါကြောင့်ဒီပလက်ဖောင်းပေါ်ကအခမဲ့အကောင့်များကန့်သတ်ချက်များစွာကိုကျော်လွှားရန်ကူညီသည်။
Deezloader ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်သည်ဂီတကို download လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဂီတကိုရိုးရှင်းတဲ့နည်းနဲ့အလွယ်တကူဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုကတော့သူတို့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာသူတို့ကြေငြာသလိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါ့အပြင်ဒီ downloads မှာအသံအရည်အသွေးမဆုံးရှုံးစေဘဲ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခု။
Deezloader ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်စရာမလိုပဲသို့မဟုတ်၎င်း၏အကောင်းဆုံးဗားရှင်းအတွက်ပေးစရာမလိုပဲသင်အမြဲတမ်းနားဆင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီတေးဂီတကူးစက်သူကကျွန်တော်တို့ကိုဒီထက်ပိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ထပ်ဆင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးသည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Deezer မှ FLAC / MP3-320 တေးဂီတဖိုင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအလွန်အဆင်ပြေစွာဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်၏စက်ပေါ်တွင်ဖိုင်ရှိရန်ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ရုံသာလုပ်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Deezer ၏တရားဝင်လင့်များကို သုံး၍ တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူလွယ်ကူစေသည်။ Deezloader နှင့်အတူ ကျနော်တို့အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတို့ကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သီချင်းများ၊ discs များပြည့်စုံစွာ download လုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ် playlists များကိုလည်း၎င်းတို့အားလုံးဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည်။ သင်ရှာနေသောဂီတအားလုံးကိုသင်ရနိုင်သည်။
ထို့အပြင် Deezloader အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရန်အလွန်လွယ်ကူသောရှာဖွေရေးယန္တရားကိုတွေ့ရသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့စိတ် ၀ င်စားသောသီချင်းများသို့မဟုတ်အယ်လ်ဘမ်များကိုအချိန်တိုင်းရယူနိုင်ပါမည်။ ဒါဟာဆိုပါတယ်ခံရဖို့ရှိပါတယ် ယေဘူယျအားဖြင့်လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အသုံးပြုသူများအတွက်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သောအလွန်ရိုးရှင်းသော interface ကိုအသုံးပြုထားသည်။ ဒါကြောင့်တေးဂီတကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာပြproblemနာမရှိတော့ပါဘူး။ ၎င်းကိုသင်၏ကိရိယာသို့အချိန်မရွေးဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်တစ် ဦး လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် သင့်ကွန်ပျူတာအတွက်ဂီတဖွင့်စက်.
နောက်ဆုံးအရေးကြီးသည့်အခြားအသေးစိတ်အချက်တစ်ချက် Deezloader သည်၎င်းသည်အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို download ပြုလုပ်ရန်အတွက်သင်ငွေမယူရပါ။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးပြုရန်လည်းမလိုပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အခမဲ့ Deezer အကောင့်ရှိသောအသုံးပြုသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကိုမင်းတို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူး.
Deezloader မှာကိုယ်ပိုင်ရှိတယ် က်ဘ်ဆိုက်ဤပရိုဂရမ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံး၊ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားလုံးကိုရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် download ရယူရန်လည်းထောက်ပံ့ပေးသည် ၎င်းသည်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအားလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အသုံးပြုသူများကို APK format ဖြင့်ဖိုင်များကိုပေးသောကြောင့်၎င်းသည်ကွန်ပျူတာများနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင်တပ်ဆင်ခွင့်ပြုသည်။
၂၀၁၈ နွေ ဦး ရာသီ မှစ၍ Deezloader သည်ပြproblemsနာအချို့နှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် Deezer သည်ဤအက်ပ်ဂီတဒေါင်းလုပ်ပရိုဂရမ်ကိုစတင်ဖြိုခွဲခြင်းဖြစ်သည် ထို့ကြောင့် အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်သူတို့သည် link များကိုစတင်ဖယ်ရှားပစ်ကြသည် သို့မဟုတ်အဘယ်သူ၏လျှောက်လွှာပိတ်ဆို့ထားပြီးအသုံးပြုသူများသည်။ ဒီပရိုဂရမ်ကိုသုံးပြီးဂီတကိုမကူးနိုင်ဘူး။ အကြောင်းပြချက်မှာ streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်။
စဉ် Deezloader APK ကိုဒေါင်းလုပ်ချရန်ဖြစ်နိုင်သည် သင်၏စက်ကိရိယာပေါ်တွင်။ ဝဘ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်လည်ပတ်နေပြီးသင်တပ်ဆင်ရန် APK ဖိုင်ကိုသင်ရနိုင်သည်။ သို့သော်ကိစ္စရပ်အားလုံး၌ ၁၀၀% အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Deezer သည်ဤကိရိယာအမျိုးအစားများကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရှောင်ရှားရန်၎င်း၏အစီအမံများကိုတိုးမြှင့်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်လက်လှမ်းမှီဆဲလူတွေရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။
ဤအကြောင်းကြောင့်သူသည်လက်ရှိရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေတွင်ရှိနေသည်။ APK ကိုဒေါင်းလုဒ် လုပ်၍ app တစ်ခုပေါ်တွင် application တစ်ခုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း Deezer သည်ဤ tool ၏အသုံးပြုမှုကိုအချိန်အတန်ကြာတိုက်ခိုက်နေသည့်အတွက်သူကကိစ္စရပ်အားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မရှိပါ။ ဒါပါ Deezloader ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အသုံးပြုသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက် သို့မဟုတ်သင်၏ကိရိယာပေါ်တွင်မပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » applications များ » Deezloader ကဘာလဲ၊ ဘာလဲ